Ny fivoahana dia mampiseho ireo mpiaro ny efijery an'ny Galaxy Note 10 | Androidsis
Ireo mpiaro ny efijery Galaxy Note 10 dia mampiseho lavaka efijery afovoany
Isaky ny manana fivoahana bebe kokoa mifandraika amin'ny Galaxy Note 10 isika tahaka izay mitranga amin'ity iray ity, izay ny maherifo dia ny screensavers-nao. Manondro izy ireo fa ny Note 10 dia telefaona izay ho tonga miaraka amin'ny foibe misy ny efijery.
Marina amin'ny hafa tena tsy mitovy amin'ny toerana hitantsika tao amin'ny Galaxy S10, ireo finday avo lenta an'ny marika Koreana Tatsimo izay milalao lavaka eo amin'ny efijery, fa eo amin'ny ankavanana ambony; izay midika fa indraindray manome olana amin'ny bokotra manan-danja sasany ao amin'ny menan'ny apps sasany izy ireo.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miatrika ny iray amin'ireo famoahana isika izay efa azontsika raisina ho marina kokoa ary asehoy anay ny mpanangona efijery avy amin'ny avo lenta farany Samsung, ny Galaxy Note 10.
Ny fonosana hafa koa dia efa tafaporitsaka izay tsy mamela toerana ho an'ny inona dia ny fifandraisana 3,5mm audio. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy miandry isika vao tena hanjary zava-misy fa mandalo an'io fifandraisana io i Samsung raha efa iray amin'ireo mpanohana be indrindra azy fa tsy toa an'i Apple sy marika hafa manana ny "fahasahiany".
Anisan'ireo fiasa resahina momba ny Galaxy Note 10, miresaka momba ny telefaona iray misy famandrihana haingana 25w isika, Fitehirizana UFS 3.0, fakantsary lehibe 12MP, telephoto 12MP, ary solomaso misy zoro 16MP. Izy io koa dia manana mpamaky rantsantanana sy bateria mety hahatratra 4.170 mAh. Izy io dia ilay chip Exynos 9825 izay ho ao anaty vavonin'ny telefaona miaraka amina RAM 12 GB ho lasa duo mahery tokoa.
Mazava ho azy fa hisy izany maodely roa samy hafa amin'ny haben'ny efijery: ny Galaxy Note 10 mahazatra misy 6,4 santimetatra ary ny maodely Pro misy 6,8 santimetatra. Ho hitantsika eo ny fomba isehoan'ny famoahana samihafa hatramin'ny volana Aogositra izay antenaina ny fampisehoana ataon'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ireo mpiaro ny efijery Galaxy Note 10 dia mampiseho lavaka efijery afovoany
Adobe Fresco no ho fampiharana vaovao amin'ny sary sy sary hosodoko miaraka amin'ny borosy izay mampiasa Art intelligence
Ny ZTE Axon 10 Pro 5G dia efa manana ny fanamarinana CE hamidy any Eropa